Iikholeji zaseNew Jersey: Qhathanisa noMthetho oQinisekisa ukungena
Ukuqhathaniswa kweCandelo loNxweme lweeKholeji zeeKholeji zeNew Jersey
I-Jersey yaseNew Jersey ineendlela ezintle kwiikholeji zikarhulumente nakwii-eyunivesithi. Izikolo zaseburhulumenteni ziyahluka ngokubanzi ngobukhulu, imishini kunye nobuntu. Imilinganiselo yokumkelwa kwamanye amazwe ihluke kakhulu kwaye ihluke kwezinye iikholeji ezikhethiweyo zelizwe kwabanye abamkelekileyo ininzi yabafakizicelo.
UMTHETHO I-Scores yeeKholeji zaseNew Jersey (phakathi kwama-50%)
University of Caldwell 18 23 17 24 16 23
ICentenary College 15 21 14 21 16 23
KwiYunivesithi yeNkundla YeGeorge 17 23 15 22 16 22
IYunivesithi yeKean 17 22 - - - -
University of Monmouth 21 25 - - - -
YaseMontclair State University - - - - - -
University of New Jersey City - - - - - -
IYunivesithi yasePrinceton 32 35 32 35 31 35
University University 19 25 18 25 19 26
University of Rutgers, Camden - - - - - -
University of Rutgers, eNew Brunswick - - - - - -
University of Rutgers, eNewark - - - - - -
I-Saint Peter yeKholeji 16 23 - - - -
University of Seton Hall 23 27 22 27 22 27
IStevens Institute of Technology 29 33 28 34 28 34
KwiYunivesithi yaseStockton 19 24 18 24 18 25
IWilliam Paterson Yunivesithi - - - - - -
Itheyibhile ngasentla inokukunceda ukuba uqaphele ukuba i-ACT yakho izikolo zijoliswe ekujoliswe kwiikholeji zakho zaseNew Jersey ezikhethiweyo. Itheyibhile ibonisa amanqaku e-ACT kumgangatho ophakathi kwama-50% wabafundi abathweswe izikolo. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, unesithuba esilungileyo sokwamkelwa. Ukuba izikolo zakho zingaphantsi kwezantsi kwinani elingaphantsi, ungesabi - i-25% yabafundi ababhalisile babala ngaphantsi kwabo babonwe.
Qinisekisa ukugcina UMTHETHO ngombono. Ingxenye enye yezicelo zakho zeekholejini, kwaye irekhodi eliqinileyo lemfundo kunye nezifundo ezicelomngeni liza kuthatha ixesha elide liphethe ubunzima. Kwakhona, ezininzi ezikolweni ezingezantsi ziza kujonga ulwazi olungenalo nolwazi kwaye zifuna ukubona intsingiselo eyinqobileyo , imisebenzi enentsingiselo yexesha elichanekileyo kunye neencwadi ezilungileyo zokuncoma . Izinto ezinjengelifa lemveli kunye nokubonisa umdla kungenza umehluko.
Qaphela ukuba i-SAT idume kakhulu kunomthetho eNew Jersey, kwaye iikholeji ezininzi azibiki izikolo zazo ze-ACT.
Ukubona apho umi khona, sebenzisa UMTHETHO kwiSAT yokuguquguquka kwetafile , uze usebenzise inguqulo ye-SAT yetafile ngasentla.
IsiNgesi isigama sokuTyhila
Ukusetyenziswa kunye nokungavumi kweeNkcazelo zeSifundo ngesiSpanish
Yintoni Ekhohlisayo Kwizobugcisa?